कांग्रेस–एमालेका नेता जस्तो बोल्ने एउटा गर्ने अर्को हाम्रो बानी होइन : डा. भट्टराई
सिरहा, २८ भाद्र । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आफूहरु भनेको कुरा पूरा गर्ने रहेको बताए । उनले कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को खालको आफूहरु नरहेको बताएका छन् ।
उनले समृद्धि हाम्रै पालामा भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै मधेशलाई समृद्ध र मधेशीलाई सम्मानित बनाउने आफ्नो मुख्य एजेण्डा भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको क्रममा सिरहा आएका डा. भट्टराईले हिमाल, पहाड र तराईलाई जोडेर राष्ट्रिय एकतालाई समृृद्ध बनाउने आफ्नो लक्ष्य भएको बताए । मधेश र मधेशीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आफू लागिपरेको उनको दाबी छ ।